ढोकामा उभिंदा उभिंदै एक्लिएका वामदेव – Nepal Press
ढोकामा उभिंदा उभिंदै एक्लिएका वामदेव
२०७७ माघ १८ गते १०:४६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अनौपचारिक विभाजन हुँदा पूर्व एमाले समूह पनि एकजुट रहन सकेन । एमाले समूहभित्रै विभाजन आउनुमा धेरै कारण छन् । एकताको नाममा कसरी ध्वंस भइरहेको थियो, भित्रभित्रै भुसको आगो कसरी लगाइएको थियो भन्ने कुरामा कमै मात्र चर्चा भएको पाइन्छ । मुख्यतः केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल दोषी छन् । तर, यहाँ तेस्रो पक्षको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
ती ‘तेस्रो पक्ष’हुन्, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम । उनले सचिवालयमा कुनै पनि पक्षलाई बहुमत नदिएर अनिर्णयको बन्दी बनाइदिए । झट्ट हेर्दा फुटमा निर्णायक जस्ता नदेखिएका तर एक जिम्मेवार व्यक्ति वामदेव गौतम पनि हुन् भन्ने कुरा कैयौं तथ्यले पुष्टि गर्दछ ।
माधवकुमार नेपालले प्रचण्डसँग मिलेर केपी शर्मा ओलीमाथि विजयी भयौं भनेर जसरी घोषणा गरेका छन्, ढिलोचाँडो माधव नेपाल र उनको समूहले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । ओली समूहले पनि फुटको मूल्य चुकाउनुपर्छ । देशको राजनीतिमा एमालेको दोस्रोपटक भएको विभाजनले त्यो पार्टीका नेताहरुलाई धेरै पीडा दिने निश्चित छ । नेकपाको फुटले देशकै राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइदिएको छ । यो लेखमा वामदेवको राजनीतिक प्रवृत्तिको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा वामदेव गौतम व्यक्तिमात्रै नभएर प्रवृत्तिकै रूपमा विकास भएको नाम हो । एमाले र माओवादी दुवै समूहका राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिसँग जोडिएका उनका कैयौं प्रवृत्ति उल्लेखनीय छन् ।
माओवादीको ‘फुटाउ र राज गर’ नीति
संगठनात्मक विधि, पद्धति र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट आएको एमाले संसदीय अभ्यासमा संस्थागत हुँदै अगाडि बढेको राजनीतिक पार्टी थियो । माओवादीको नीति २०५२ देखि एमाले भत्काउने थियो र २०७७ सम्म पनि एमाले भत्काउने नै थियो । २०५६ सालमा एमालेबाट फुटेर माले भएका धेरै नेता-कार्यकर्ता माओवादीले एकीकृत गरेको थियो । प्रचण्डको ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति बुझ्न नसक्नु नै वामदेव गौतम र माधवकुमार नेपालको ठूलो राजनीतिक भुल रह्यो ।
नेकपा (एमाले) २०५६ मा विभाजन हुँदा सबैभन्दा पीडा एमालेका नेताहरुलाई भएको थियो । त्यसको ठूलो फाइदा भने प्रचण्ड र माओवादी समूहले लिएको थियो । वामदेव गौतम सांसदहरूको झण्डै आधा समूह लिएर फुटे, एमाले फर्कंदा कार्यकर्ताको ठूलो समूह माओवादीसँग गइसकेको थियो, सीपी मैनाली अलग्गै बसे । गौतम सानो समूह लिएर एमालेमा फर्किए ।
इतिहासलाई अर्काे मोहडाबाट दोहोर्‍याउँदै माधव नेपालको सहयोगमा २०७७ मा पनि प्रचण्ड समूहले एमालेको फुटबाट ठूलो फाइदा लिएको छ । यसरी वामदेव गौतम र माधवकुमार नेपाल आफूले निर्माण गरेको पार्टी ध्वंस गरेर माओवादी र प्रचण्डका सहयोगी सावित भएका छन् । सैद्धान्तिक विषयको चर्चा गर्ने हो भने बहुदलीय जनवादलाई त ‘लौरो न हतियार’ बनाइसकेका छन् ।
माओवादीले नेकपा (मसाल) लाई पनि धेरैपटक फुटाउन सफल भएको छ । विभिन्न कालखण्डमा अरु पार्टीहरुलाई फुटाउँदै जम्मा गरेका ‘पुरेतका गाई’हरुले माओवादी पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन् । पुरेतले जतिसुकै गाई जम्मा गरे पनि ती सबै पाल्न सम्भव हुँदैन । किनभने उसको मुख्य पेशा पुरेत्याइँ हो, गाई पाल्नु होइन । प्रचण्ड समूहको मुख्य पेशा अन्य पार्टी फुटाउनु र शक्ति आर्जन गर्नु हो, आफ्नो पार्टी निर्माण गर्नु होइन ।
प्रचण्डले मसाल फुटाएर जम्मा गरेका बाबुराम भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, नवराज सुवेदीलगायतका नेताहरु आज माओवादीसँग छैनन् । प्रचण्ड र माओवादीको मुख्य उद्देश्य आफ्नो पार्टी विधि र पद्धतिबाट बलियो बनाउने होइन, अन्य पार्टी फुटाएर राज गर्ने हो । अब प्रचण्डले माधव नेपाल र उनको समूहमाथि राज गर्ने निश्चित छ । उनले जति समय सक्छन्, त्यो समूहमाथि राज गर्छन् ।
गौतमको कमजोर राजनीतिक विश्लेषण
वामदेव गौतमको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक र सांगठनिक विश्लेषण क्षमताको अभाव हो । उनले जुन राजनीतिक र सांगठनिक विश्लेषण गर्ने गर्दछन्, त्यो पार्टीको दीर्घकालीन हित र तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा होइन कि पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका के रहन्छ भन्नेलाई केन्द्रमा राखेर गर्छन् । उनले आफ्नो स्वार्थको कारण ती विश्लेषण र आफ्नो भूमिका पनि फेरिरहन्छन् ।
वामदेव गौतमलाई पार्टीभित्र बारम्बार भकुण्डो बनाइने गरेको चर्चा नेकपाभित्र भइरहन्छ । उनी किन बारम्बार भकुण्डो भइरहन्छन्, त्यसको विश्लेषण नगरिकन गौतमको भूमिकाको व्याख्या गर्न सकिंदैन । राजनीतिमा एउटा भनाइ छ, ‘डन्ट स्ट्याण्ड अन द डोर’। जब कोही ढोकामा उभिन्छ भने अन्य व्यक्तिहरू ढोकाभित्र जाँदा पनि, भित्रबाट बाहिर निस्कँदा पनि उभिएको मान्छेलाई धकेल्नैपर्ने हुन्छ ।
विगत लामो समयदेखि वामदेव गौतम नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको ढोकामा उभिएका थिए । ओलीतिर ४ जना र प्रचण्डतिर ४ जना भएको अवस्थामा ढोकामा उनी एक्लै थिए । सचिवालयमा ९ जनामध्ये गौतम लगातार केपी ओली समूहमा उभिएका भए ओलीले बहुमतको आधारमा धेरै निर्णय गरेर अगाडि जान सक्थे । गौतमले ओलीलाई बहुमत पनि दिएनन् र प्रचण्डलाई साथ पनि दिएनन् ।
नेकपा सचिवालयको बैठकमा गौतम घडीको पेण्डुलम जस्तै यता र उता हल्लिएर मात्रै सक्रिय भए । वास्तविकता सेकेण्ड सुई नै किन नहोस्, समय दिन काम लाग्छ । तर पेण्डुलम काम लाग्दैन भन्ने कुरा वामदेवले बुझ्न सकेनन् । घडीको पेण्डुलम सुईभन्दा ठूलो हुन्छ तर समय दिन काम लाग्दैन । ठीक त्यस्तै उनी नेकपाको निर्णय प्रक्रियामा काम लाग्ने पात्र बन्न सकेनन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र वामदेव गौतमकै कारण कैयौं निर्णय हुन पाएनन् । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले निर्णय गर्न नसक्दा त्यसको असर के हुन सक्छ भन्ने कुरा वामदेवले कहिल्यै ख्याल गर्न सकेको देखिएन । पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनको लागि उनले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । नेपालका कुनै पनि विश्लेषकले यो कोणबाट विश्लेषण गर्न सकेको देखिएन ।
लामो समयसम्म ढोकामा उभिएपछि उनी दुवै समूहको लागि विश्वासयोग्य बन्न सकेका छैनन् । आफ्नो स्वार्थ कहिले पूरा होला र निर्णय दिउँला भनेर वामदेवको स्वार्थ दुवै समूहले पूरा गरिदिन सक्ने अवस्था थिएन ।
प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनको समय २०६२ मा नेकपा (एकताकेन्द्र-समाल) मा अन्तरविरोध चर्किएको थियो । पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र सहमहामन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहबीच ‘न सम्बन्ध, न सम्बन्धविच्छेद’ को स्थिति पैदा भएको थियो । पार्टीले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन थियो ।
मोहनविक्रम सिंहले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई माओवादीको पिछलग्गु घोषणा गरेका थिए । कालान्तरमा श्रेष्ठ माओवादीसँगै मिल्न पुगे । मोहनविक्रम सिंह र चित्रबहादुर केसीले पूर्वमसाल समूह एकजुट हुनुपर्ने र एकता केन्द्रसँग सँगै बस्न नसकिने निष्कर्षका साथ गोरखपुरमा भेलाको आयोजना गरेका थिए । पार्टी फुट्न नदिने भन्दै तेस्रो धारको रुपमा उदाएको रामसिंह श्रीसको समूहले उक्त भेला बहिस्कार गर्‍यो ।
पार्टी एकता कायम राख्न दबाब दिनुपर्ने अभियानको लागि गठन भएको तेस्रो धार अहिले वामदेवको समूहजस्तै दुवैतिर अस्वीकृत भयो । अन्ततः रामसिंह समूह छुट्टै पार्टी गठन हुन पुग्यो । पूर्वमसालको झण्डै आधा शक्ति हुत्याएको समूहले आफूलाई त्यही रुपमा अडाउन सकेन । धेरैजसो माओवादीमा गए । श्रीसको समूह अन्ततः मोहन वैद्यको समूहसँग एकता गरेर बसेको छ ।
अहिले वामदेव गौतमसँग अत्यन्तै सानो समूहमात्रै बाँकी छ । उनले त्यो कुरा स्वीकार गरेका पनि छन् । तर उनी पार्टीभित्र किन त्यसरी एक्लै हुन पुगे ? विचारको लागि उनी एक्लै भएका होइनन् । पदको खोजी गर्दै जाँदा उनी एक्लै हुन पुगेका हुन् । पार्टीमा प्रभाव जमाएर पद प्राप्त गर्ने भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीसँग लेनदेनको लागि बार्गेनिङ गरेर आफ्नो समय बर्बाद गरे ।
वामदेवसँग भएका विकल्प
वामदेवले पुनः पार्टी एकता गराएरै छोड्ने घोषणा गरेका छन् र पार्टी एकता गर्नको लागि दबाब समूह गठन गरेका छन् । यदि नेकपा भोलिका दिनमा एकता भएछ भने पनि ओली र प्रचण्ड समूहको आवश्यकताको आधारमा एकता हुनेछ । वामदेव गौतमको दबाबका कारण एकता हुने कुनै पनि आधारहरु छैनन् ।
वामदेवको बल पुग्थ्यो भने पार्टी विभाजन हुने थिएन । वास्तवमा वामदेवसँग पार्टी एकता जोगाउने राजनीतिक, सांगठनिक र नैतिक हैसियत थिएन । आफू पदको लागि मरिहत्ते गर्ने, प्रधानमन्त्री चाहिने, पार्टी अध्यक्ष चाहिने, चुनाव हारेर पनि सांसद चाहिने व्यक्ति सबैको लागि सर्वस्वीकृत हुन सक्दैनन् ।
विगतमा माले र मार्क्सवादीबीच एकता हुँदा मनमोहन अधिकारी जसरी सर्वस्वीकृत व्यक्तित्वको रुपमा नेतृत्वमा आएका थिए, अहिले वामदेव ओली र प्रचण्ड समूहको सर्वस्वीकृत नेता होइनन् । ती दुवै समूहमा कुनै पनि सर्वस्वीकृत नेता छैनन् । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने एमाले र माओवादी एकता हुँदा एउटा मात्रै अध्यक्ष हुने थिए । अब कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो भने र तिनीहरुले पार्टी एकताको आवश्यकता महसुस गरे भने एकता हुन सक्छ । तर वामदेवको आह्वानकै आधारमा पार्टी एकता हुने आधार अहिले छैन ।
वामदेवको राजनीतिक हैसियत झन् पछि झन् कमजोर बन्दै गएको छ । राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न आफूसँग विचार, राजनीति र संगठित शक्ति हुनुपर्दछ । वामदेवलाई समर्थन गर्ने ठूलो संगठित शक्ति छैन । आफूले अध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबीबाहेक अन्य कुनै अवधारणा अगाडि सारेका पनि छैनन् । उनको सानो शक्तिको सुनुवाइ नहुने निश्चित छ । अब उनीसँग तीन वटा विकल्प छन् । एक, केपी शर्मा ओली समूहसँग मिसिने, दुई प्रचण्ड समूहसँग मिसिने, तीन आफ्नै पार्टी बनाउने । तेस्रो विकल्प उनको लागि निकै प्रत्युपादक हुने बुझेको हुँदा पहिलो र दोस्रोमध्ये जे गर्दा आफूलाई उपयुक्त देख्छन्, त्यही गर्नेछन् ।
प्रकाशित: २०७७ माघ १८ गते १०:४६
3 thoughts on “ढोकामा उभिंदा उभिंदै एक्लिएका वामदेव”
Yo padkhor lai PKD le nai lai jaawos ra PM banaawos. Muldhar ma vacancy chhaina.
यो लेखमा एउटा वास्तविकता दिउसै रात पार्ने गरि लुकाईएको छ । एमाओवादी र एमालेको एकता एमालेको तर्फबाट कस्ले किन गर्यो ? कुन उदेश्यले एकता गरियो ? के कारण एकता भंग भयो ? त्यो अवस्थाको जिम्मेवारी एमालेमा कस्ले लिन पर्छ ? आजको एमालेमा आएको संकटमा त्यो एकता जिम्मेवार हुन्छ हुदैन ? यि प्रश्नको विष्लेषणात्म उत्तर लुकाएर लेखिएको लेखलाई प्रपोगाण्डा अन्तर्गत कै लेख मान्दा हुन्छ । त्यस्तै मजबुत एमाले भयो रे मुलुकमा त्यो एमालेले मुलुक र जनतालाई डेलिभरि चै दिने के होला ! म त ट्वा !
सही विश्लेषण विमल जी को